Lasa resabe ilay malagasy avy any andafy mitantara ny fiainan'ny ambanivolo eto Madagasikara • Madagossip
Lasa resabe ilay malagasy avy any andafy mitantara ny fiainan’ny ambanivolo eto Madagasikara
Mbola tsy ampy herinandro akory dia efa nahatratra 100 mahery ireo olona nizara ilay video ary nojerena mihoatra ny in-25000 izy ity.
Ao amin’ny commentaires no tena diavolana : marobe ireo manakiana ary misy kosa ny miaro azy. Resaka tovovavy malagasy mipetraka any ampitan-dranomasina sy manambady vazaha ilay raha. Efa nitety an’izao tontolo izao, ary ity indray mitoraka ity dia nisafidy hitsidika ny ambanivolo eto Madagasikara (Manantenina, Fort-Dauphin).
Mpijery commentaire miaraka amin’ny pop-corn!
Tsy atao lava ny resaka fa indro aseho anao eto ambany ilay video (8mn) ary ato kosa ianao raha hamaky ny commentaires rehetra.
Ary ianao ahoana ny fahitanao ny tranga toy izao?
Tagsandafy diaspora fort-dauphine gasy lokaro manantenina